Urban miti mhando uye kugona kwavo kutora CO2 | Green Renewables
Mutaundi miti yemiti uye kugona kwavo kutora CO2
Adriana | | Tora co2, Environment
ari kabhoni dhayokisaidhi Ivo vane hanya nemaguta uye nzira dziri kutsvaga kudzikisa kana kupinza iyi inosvibisa.
La Junta de Andalucía uye iyo Yunivhesiti yeSeville vari kushanda pachirongwa chinonzi "Masango nemaguta". Iyo inosanganisira kutora nzvimbo yeruzhinji yeguta uye kudyara yakati wandei miti nemiti yekuumba masango emadhorobha maseru ne Zvisikwa zvisikwa iyo inotora carbon dioxide.
Yakaferefetwa kuti ndeapi marudzi aigona kwazvo tora CO2 uye zvakagumiswa kuti miti yakaita semandimu, orenji inovava, nduru uye laurel ndiyo ine kukosheswa kwepamusoro kweCO2. Kana ari makwenzi, ayo anoshanda zvakanyanya nde oleander, ligustrina, lavender, nemuchindwe.
Iko kushandiswa kwemarudzi aya mumaguta hakuzogadzirise chete iyo kunaka kwemweya sezvo ichisefa zvidimbu uye zvinosvibisa, asi ivo zvakare vanozowana yekushongedzwa uye kugadzirisa kwenzvimbo yemaguta, ivo vanozokwanisa kupinza yakawanda mvura saka zvinobatsira kudzivirira mafashama, kugadzirisa tembiricha yenharaunda, kudzikisira ruzha, pakati pezvimwe zvakanaka.
Inofungidzirwa kuti miti ye2000 ine yakakwira inokwanisa kutora CO2 inogona kunongedza matani 160 ekabhoni dhayokisaidhi pagore, inova yakawanda yeguta. Kana kune izvi akawedzera kudzikiswa kwekusvibiswa kubva mumotokari nemaindasitiri, iko kuwedzera kukuru mu nzvimbo.
ari zvakasikwa CO2 inonyura Izvo zvakakosha kwazvo asi hazvina kukwana kana chisi chisina kudzikiswa uye zvimwe zviito zvikaitwawo.
Maguta akati wandei muAndalusia arikushandisa sango nemadhorobha chirongwa chekuvandudza hupenyu hwevagari vayo uye kushandira pamwe mukurwisa kuchinja kwemamiriro ekunze.
Aya marudzi ezviito anobatsira uye kazhinji anotendera kuti adzokororwe mune vamwe, saka inzira yekusimudzira zviito zvekongiri zvekudzikisa mweya weCO2 munharaunda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Environment » Tora co2 » Mutaundi miti yemiti uye kugona kwavo kutora CO2
patricia padilla akadaro
Zvese zviri nharaunda, zvisikwa, kudzivirira njodzi, agriltura kwandiri zvinonakidza, vanhu havapedze kudzidza. Chinyorwa chakanakisa.
Pindura pataricia padilla
Renewable Energy Makambani eSpain, chikamu II